Wasiirka Arimaha Guddaha Somaliland oo Ka hadlay Sanad guurada 25 ee aasaaska Ciidamada Booliska Somaliland – WARSOOR
Wasiirka Arimaha Guddaha Somaliland oo Ka hadlay Sanad guurada 25 ee aasaaska Ciidamada Booliska Somaliland
Hargeysa – (warsoor) – Wasiirka Arimaha Guddaha Somaliland Md. Maxamed Kaahim ayaan maanta ka hadlay xuska aasaaska sanadd guuradda 25 ee ciidamadda Booliska Somaliland.
Munaasibadda xuskan ayaa ka dhacday xarunta ciidamadda Booliska Somaliland waxaana ka qayb galay madaxweynaha Somaliland iyo masuuliyiinta kale ee wasaaraddaha Somaliland, marti-sharaf kale oo tiro badan.
Wasiirka ayaa ka hadlay xaaladda ciidamada booliska Somaliland. Halkan hoose ka daawo qudbadiisii.
Madaxweyne Muuse: Dhumay waxa maanta isugu imanaya inta Af-soomaali ku hadasha oo dhan, waanu soo dhawaynaynaa, waxaanay Marti u yihiin Dawladda Somaliland